Manampahaizana PR: Tsy afa-maina amin'ny CAN-SPAM | Martech Zone
Manampahaizana PR: Tsy afaka amin'ny CAN-SPAM ianao
Talata, Aprily 20, 2010 Talata, May 10, 2016 Douglas Karr
Ny hetsika CAN-SPAM dia efa nivoaka hatramin'ny 2003, fa matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe manohy mandefa mailaka betsaka isan'andro hampiroborobo ny mpanjifany. Mazava ny hetsika CAN-SPAM, manarona ny “misy hafatra elektronika izay ny tanjona voalohany amin'izany dia ny doka ara-barotra na fampiroboroboana vokatra ara-barotra na serivisy."
Ireo manam-pahaizana momba ny PR mizara fanambarana amin'ny bilaogera dia mahafeno fepetra. The Torolàlana FTC mazava ho an'ireo mpandefa mailaka ara-barotra:
Lazao amin'ireo mpandray ny fomba hialana amin'ny fandraisana mailaka ho avy aminao. Ny hafatrao dia tsy maintsy misy fanazavana mazava sy miharihary momba ny fomba ahafahan'ny mpandray misafidy tsy hahazo mailaka avy aminao amin'ny ho avy. Ataovy amin'ny fomba mora ilay fampandrenesana amin'ny fomba mora ho an'ny olon-tsotra hahafantatra, hamaky ary hahatakatra.
Isan'andro aho dia mahazo mailaka avy amin'ireo matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe ary izy ireo na oviana na oviana manana mekanisma opt-out. Ka… hanomboka handray andraikitra azy ireo aho ary hametraka an Fitarainana FTC isaky ny mailaka azoko izay tsy manana mekanisma opt-out. Manoro hevitra ireo bilaogera hafa aho mba hanao izany koa. Mila ampamoahina ireo matihanina ireo.
Ny torohevitro ho an'ny Professionals PR: Makà mpanome tolotra mailaka ary tantano avy hatrany ny lisitry ny lisitry ny hafatrao. Tsy mampaninona ahy ny mahazo mailaka mifandraika, fa tiako ny fotoana hialana amin'ireo mailaka tsy misy dikany.
Tags: Can-amin'ny spammailaka avo lentamailakapitchesprpr pitchesfifandraisana amin'ny vahoakaamin'ny spam
Apr 21, 2010 amin'ny 8: 27 AM
Misy fanontaniana iray misaraka eto, dia ny hoe, “maninona ireo olona PR ireo no tsy manamboatra fefy namboarina manokana?”
Amin'ny maha-bandy PR ny tenako (tsy nanantona anao velively, na izany aza) dia mikorontan-tsaina aho amin'ny fipoahana mailaka marobe. Ny fomba fanao tsara indrindra dia ny fahalalana hatrany ny mpihaino anao sy ny famokarana kianja mahaliana azy ireo fa tsy ny manafotra sy mivavaka.
Ny lahatsoratrao dia mitarika amin'ny fanaraha-maso na dia izany aza - tokony hametraka hoe "Azafady mba ampahafantaro ahy raha tsy tianao ny hihaino ahy" -kazo mifidy isaky ny faran'ny mailaka samy irery natokana?
Apr 21, 2010 amin'ny 11: 35 AM
Salama Dave! Farafaharatsiny, tokony hisy tsipika ao. Na adiresy tsirairay na tsia ny mailaka dia tsy midika izany fa tsy SPAM. Tsy misy haben'ny lisitra 'farafahakeliny' ho an'ny mailaka miorina amin'ny varotra. 🙂
Raha mbola tsy an'ny tenany manokana izany ary fampiroboroboana ny natiora, mino aho fa tokony hanaraka ireo matihanina PR.
Apr 21, 2010 ao amin'ny 2: PM PM
Heveriko fa manana hevitra tsara ianao. Mety hieritreritra ianao fa amin'ny fotoana sasany dia ho fantatry ny matihanina PR fa ilainy ny mivarotra ny mpanjifany mifototra amin'ny fifandraisana matanjaka fa tsy manery media… Tokony ho fantatr'izy ireo farafaharatsiny fa tsy tokony hanorisory bilaogera miaraka amin'ny mpihaino ianao 😉
Apr 24, 2010 amin'ny 9: 15 AM
Misy ve firaketana milaza hoe firy ny fanitsakitsahana ny Spam azo ampiharina hatreto amin'ny onitra nangonina?
Apr 27, 2010 ao amin'ny 2: PM PM
Ny fanarahana CAN-SPAM dia tokony ho bara mora ialana, saingy misy fiovana tsy manam-paharoa amin'ny fizotry ny PR mahazatra raha mampihatra ny tena fanarahan-dalàna ianao. Ny fampidirana rohy tsy misoratra anarana sy ny adiresy ara-batana dia tokony hahitanao ny ankamaroan'ny làlana mankamin'ny toerana tianao hisy ary tokony hanao izany ny mpampiasa PR rehetra. Na izany aza, eo amin'ny lafiny CAN-SPAM, ara-teknika, raha misy ny manakana anao tsy afaka mandefa mailaka azy ireo intsony, raha tsy miverina miditra izy ireo. Azonao atao ny mihevitra ny mpanjifa samihafa ho "tsipika fandraharahana samy hafa" araka ny lalàna satria mety hamono olona noho ny tantara ny mpanjifa iray. , nefa hevero ho fandaniam-poana ny famotsorana anao amin'ny hafa. Ary koa, amin'ny maha agents anao (miasa amin'ny maha-mpanonta) ny mpanao doka dia mila mizara ny safidinao amin'ny mpanao dokambarotra (ny mpanjifanao ianao) mba tsy handefasan'izy ireo any amin'ilay adiresy mailaka misy olana ihany koa amin'ny fizotran'ny PR. Azonao atao ihany koa ny miady hevitra fa tsy mivarotra ilay vokatra resahina amin'ny mpanao gazety ianao ho mpanjifa farany, noho izany ara-teknika dia mandefa mailaka fampahalalana na fifanakalozana ianao. Ary raha misy mamoaka vaovao mifandraika amin'ny tanjona hahazoana fanambarana an-gazety, dia misy ny fanekena. Marina ny peta-drindrina eto fa ny tanjona kendrena ary ny tena zava-dehibe amin'ny mpanao gazety. Spam dia eo imason'ny mpijery. Eritreritra mahafinaritra CAN-SPAM vitsivitsy fotsiny ho an'ny andro!
Todd- Fantatro fa efa mihoatra ny 100 ny fanenjehana Can-Spam. Ny FTC dia afaka mitory ary koa ny an'ny State AG, ary ny ISP toa ny AOL dia afaka mitory amin'ny Can-Spam. Ka orinasa toa an'i Microsoft dia nahazo tombony be dia be avy amin'ireo mpisandoka heloka bevava ary hitako ny FTC mahazo $ 55,000 ka hatramin'ny $ 10 tapitrisa. Nahazo valisoa lehibe indrindra ny Facebook tamin'ny $ 80 tapitrisa. Ny flipside dia ny ankamaroan'ny loka dia tsy voangona mihitsy. Fanadihadiana marobe ihany koa no miafara amin'ny fametrahana tsy misy fanambarana an-gazety, ka ny tena isan'ny hetsika fampiharana dia toa tsy voatanisa. Hanontany ny biraon'ny fampahalalam-baovao ampahibemaso momba izany aho ary hijery izay azoko atao. Cheers!